टोक्यो वरिपरि (कन्तो क्षेत्र)! Pre प्रान्तहरूमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू - Best of Japan
तोशोगु तीर्थमा योमेइमोन गेट, निक्को, जापान = शटरस्टक
यदि तपाईं जापानको टोकियो जानुहुन्छ भने, किन टोकियो वरपर छोटो यात्राको मजा लिनुहुन्न? टोकियो मा केन्द्रित Kanto मैदान (Kanto क्षेत्र) मा धेरै आकर्षक दर्शनीय स्थलहरु छन्। ती क्षेत्रहरूमा तपाईं टोकियो शहरको केन्द्र भन्दा भिन्न विविध संसारको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईंलाई यहाँ केन्टो क्षेत्रमा सिफारिश गरिएको स्थानहरूमा परिचय गराउन चाहन्छु।
कान्टो क्षेत्रको रूपरेखा
कन्टोमा स्वागत छ!
लेक आशी र माउन्ट फुजी पृष्ठभूमिको रूपमा, हाकोने, कानगावा प्रान्त, जापान
कन्टोको नक्शा = शटरस्टक
कान्टो क्षेत्रमा कान्टो मैदानमा अवस्थित pre प्रान्तहरू समावेश छन्। यसको केन्द्रिय भाग टोकियो महानगर (टोकियोमा केन्द्रित विशाल शहरी क्षेत्र) को रूपमा विकसित भएको छ।
त्यहाँ धेरै JR रेलवे नेटवर्कहरू र निजी रेलमार्गहरू छन्, र रेलहरू सही सेकेन्डमा सञ्चालन हुन्छन्। सामान्यतया, यी रेलवे नेटवर्कहरू संरचित छन् जसले गर्दा टोक्यो केन्द्र र वरपर मानिसहरू कुशलतासाथ अघि बढ्न सक्दछन्। टोकियो महानगरको जनसंख्या करीव 35 करोड छ।
कन्तो मैदानमा क्षेत्रहरू बिस्तारै टोकियोसँग नजिकबाट जोडिएका छन् जुन विस्तार हुन जारी छ। जहाँसम्म, अर्कोतर्फ, टोकियोबाट टाढाका क्षेत्रहरूमा अझै पनि भूमिमा अद्भुत दृश्य र जीवन संस्कृति छ। र ती क्षेत्रहरु टोकियो बाट पर्यटकहरु को भीड छन्।
कृपया कन्टो क्षेत्रको प्रत्येक क्षेत्र भ्रमण गर्नुहोस्। तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ?
हिताची समुद्री किनारा पार्कमा नेमोफिलाको दृश्यको आनन्द लिइरहेका पर्यटकहरूको भीड, यो स्थान जापानमा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य = शटरस्टक
इबाराकी प्रान्त टोकियोको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ र प्रशान्त महासागरको सामना गर्दछ। मिटो सहरमा जो प्रिफेक्चुरल अफिसको स्थान हो, त्यहाँ एक प्रसिद्ध जापानी बगैंचा कैराकुएन छ। र, लगभग २ घण्टा टोक्यो स्टेशनबाट एक्सप्रेस बस द्वारा, त्यहाँ हिताची समुद्रतट पार्क छ। यस विशाल पार्कमा, त्यहाँ अचम्मको फूल बगैंचाहरू छन् जुन माथिको फोटोमा देखिएका छन्। वर्षभरि विभिन्न फूलहरू फूलेको छ।
इबाराकी प्रान्त टोकियोको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ र प्रशान्त महासागरको सामना गर्दछ। मिटो सहरमा जो प्रिफेक्चुरल अफिसको स्थान हो, त्यहाँ एक प्रसिद्ध जापानी बगैंचा कैराकुएन छ। र, लगभग २ घण्टा टोक्यो स्टेशनबाट एक्सप्रेस बस द्वारा, त्यहाँ हिताची समुद्रतट पार्क छ। यो विशाल पार्कमा, ...
शरद Keतुमा केगन फल्स र लेक चुजेन्जी, निक्को, जापान = एडोब स्टक
टोकियो, कामकुरा र कानागावा प्रान्तमा हाकोने र तोचिगी प्रान्तको निक्को वरपर रहेका प्रसिद्ध पर्यटन स्थलहरूको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ। निक्कोको एक राजसी तोशोगु तीर्थ छ जुन यस पृष्ठको शीर्ष फोटोमा देखिएको छ। र तपाईं माथि चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एक अद्भुत राष्ट्रिय पार्क छ। पहाडहरूले घेरिएको चुजेन्जी ताल साँच्चै नै सुन्दर छ।
टोकियो, कामकुरा र कानागावा प्रान्तमा हाकोने र तोचिगी प्रान्तको निक्को वरपर रहेका प्रसिद्ध पर्यटन स्थलहरूको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ। निक्कोको एक राजसी तोशोगु तीर्थ छ जुन यस पृष्ठको माथिल्लो फोटोमा देखिएको छ। र तपाईं माथि चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एक अद्भुत राष्ट्रिय पार्क छ। ...
गुन्मा प्रान्त कन्टो क्षेत्रको उत्तरपश्चिमी भागमा अवस्थित छ। यस क्षेत्रमा एक पटक सेरीकल्चर र टेक्सटाईल उद्योग सेवा दिँदै जापानको आधुनिकीकरणमा यसले ठूलो योगदान पुर्‍यायो। गुम्मा प्रान्तमा ओज छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पैदल यात्राको लागि सिफारिश गरिएको छ। सामग्रीको तालिका गुणमाओजको रूपरेखाको रूपरेखा
"Hitsujiyama पार्क" को परिदृश्य जहाँ Moss Phlox चारै तिर फूल्दछ। अप्रिल देखि मे सम्म, पहाडहरू गुलाबी र सेतो फूलहरूले भरिन्छ = शटरस्टक
सैतामा प्रान्त टोक्योको उत्तर तर्फ अवस्थित छ। यहाँ धेरै पार्क र शहरहरू छन् जुन तपाईं टोकियोबाट सजिलै भेट्न सक्नुहुनेछ। हालसालै काभोगो शहर लोकप्रिय छ जहाँ इडो अवधिका धेरै पुराना भवनहरू सुरक्षित छन्।
सैतामा प्रान्त टोक्योको उत्तर तर्फ अवस्थित छ। यहाँ धेरै पार्क र शहरहरू छन् जुन तपाईं टोकियोबाट सजिलै भेट्न सक्नुहुनेछ। हालसालै काभोगो शहर लोकप्रिय छ जहाँ इडो अवधिका धेरै पुराना भवनहरू सुरक्षित छन्। सामग्रीको तालिका SaitamaChichibu मेट्रोपोलिटन क्षेत्र बाहिरी भूमिगत डिस्चार्ज च्यानलको Soutama को रूपरेखा को रूपरेखा ...
पर्यटक र जापानी पैदलै नरिटासन शिन्शोजी मन्दिर मैदानमा। यस मन्दिरको १००० बर्ष भन्दा बढीको ईतिहास छ तीन तलामा सुन्दर प्यागोडा = शटरस्टकको साथ
सैतामा प्रान्त टोकियोको पूर्वमा अवस्थित छ। यस प्रान्तमा नरिता एयरपोर्ट छ। एयरपोर्टको नजिकै त्यहाँ नरितासन शिन्जोजी मन्दिर छ जसरी माथि चित्रमा देखाइएको छ। थप रूपमा, माउन्ट। नोकोगिरिमा पनि लोकप्रिय छ।
सैतामा प्रान्त टोकियोको पूर्वमा अवस्थित छ। यस प्रान्तमा नरिता एयरपोर्ट छ। एयरपोर्टको नजिकै त्यहाँ नरितासन शिन्जोजी मन्दिर छ जसरी माथि चित्रमा देखाइएको छ। थप रूपमा, माउन्ट। नोकोगिरिमा पनि लोकप्रिय छ। चिबा बलात्कार को रूपरेखा खिलै चिबा प्रान्त को नक्शा मा "Isuimi रेलमार्ग" संग राम्ररी खिल्यो।
टोकियोको उपनगरहरुमा, MT छ। माथिको तस्वीरमा देखिए जस्तै टाकाओ। यस पहाडले मिचेलिन गाइडका साथ तीन तारा जितेको छ। तपाईं सजीलै शिखरमा केबल कार द्वारा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक रहस्यमय मन्दिर र सुन्दर प्रकृति छ। सामग्रीको तालिका टोकियो मेट्रोपोलिटनशो किन्ने पार्कमेटको आउटलाइन। ...
कामकुरा जापानमा ग्रेट बुद्ध। अग्रभाग चेरी फूल हो। कामकुरा, कानागावा प्रान्त जापान = शटरस्टकमा रहेको
कानागावा प्रान्त टोक्योको दक्षिणमा अवस्थित छ। यो प्रान्तमा योकोहामा, कामकुरा, एनोशिमा र हाकोण जस्ता धेरै लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरू छन्।
कानागावा प्रान्त टोक्योको दक्षिणमा अवस्थित छ। यो प्रान्तमा योकोहामा, कामकुरा, एनोशिमा र हाकोण जस्ता धेरै लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरू छन्। सामग्रीको तालिका कानागावा योकोहामा कामाकुरा हाकोनेको रूपरेखा कनागावा माउन्ट, फुजी, र, एनोशिमा, शोनान, कानगावा, जापान = शटरस्टक ताल आशी र माउन्ट फुजी पृष्ठभूमि, हाकोने, कानागावा प्रान्त, जापान नक्सा कानागावाको नक्शा ...